7-Jir Magaceedu Dhibaato Ku Noqday Iyo Waalidkeed Oo Cabasho U Diray Barlamaanka Dalkooda | Hawraar
7-Jir Magaceedu Dhibaato Ku Noqday Iyo Waalidkeed Oo Cabasho U Diray Barlamaanka Dalkooda
Gabadh yar oo u dhalatay dalka Australia ayaa magaceedu ku noqday dhibaato, taas oo ilaa heer gaadhay in waalidka dhalay gabadhaas yari, dacwad ay arrintaa kaga cabanayaan u gudbiyaan, hay’adaha caddaalada iyo sharci dejinta ee dalka Australia.
Gabadhan ayaa magaceeda ISIS, loo bixiyay markii ay dhalatay sidaana loogu diiwaan geliyay, laakiin tan iyo intii ay soo baxday, kooxda Dacish ee dawlada Islaamiga Sham iyo Ciraaq la magac baxday, taas oo magaceeda marka afka Ingiriisiga loo soo gaabiyo uu noqonayo, ISIS, gabadhan yari noqotay mid si gaar ah loogu fiirsado, dadkana sidii wax ku soo boodo ah oo kale ku noqoto.
Aabaha dhalay gabadhan yar ee Magaceedu Dacishi oo af Ingiriisi ah noqonayo, ayaa sheegay in sababta uu gabadhiisa ugu bixiyay, aanay wax xidhiidh ah la lahayn, Islaamka iyo koox muslimiin ah midna, balse uu isagu aad u jecel yahay, taariikhda iyo sheekooyinkii laga soo wariyay Faraaciintii hore sidaa awgeed uu gabadhiisa yar ugu magac daray, Magac Mid ka mid ah sanabyadii ay Faraaciintii hore ee Masar caabudi jirtay.
Aabahan ayaa ku guulaystay inuu boqolaal qof oo ka mid ah shacabka dalka Australia ka dhaadhiciyo inay taageeraan, olole uu ugu jiro, in kooxda Dacish, warbaahinta dalkaasi joojiso inay magacooda af ingiriisiga loo isticmaalo xuruufta loo soo gaabiyo ee ISIS.
Waxaanu helay ku dhawaad dhawr boqol oo qof, kuwaas oo saxeexay baaq uu barlamaanka dalkaas iyo maxkamada sare kaga codsanayo in la mamnuuco adeegsiga Magaca ISIS ee kooxda Dawlada Islaamiga ah ee Sham iyo Ciraaq, warbaahintu u adeegsato.
Gabadhan yar ayaa ka mid noqonaysa dad iyo meherado hore ula baxay magaca ISIS, oo markii kooxda Dacish soo baxday, uu ku noqday dhibaato hor leh oo noloshooda iyo muuqaalkooda saamayn ku yeelatay.